mairie-antananarivo – Fampidirana ireo mpivarotra : Ambany tetezana Behoririka
Fampidirana ireo mpivarotra : Ambany tetezana Behoririka
auteur 2 febroary 2017 Commentaires fermés
Androany 02 Janoary 2017 no natolotry ny Délégué ny Boriborin-tany fahatelo,izay misolotena ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana ny toerana ho an’ireo mpivarotra amoron-dalana nanomboka teo amin’ny “Station SHELL” hatrany ambany tetezan’i Behoririka; ka nampidirina teo amin’ny mpivarotra “éponge” taloha akaiky ny EPP Behoririka sy manolona ny EPP.
Tao aorian’ny fivoriana izay nampiantsoana azy ireo teny amin’ny Lapan’ny Tanàna no nahafantarana ny isan’ ireo mpivarotra marina. Araka izany dia miisa 194 izy ireo, ka manomboka izao dia ahazo toerana tsirairay avy ,eny Behoririka.
Mirefy iray menatra avy ny anjaran’ny tsirairay ary sokajiana araky ny entana varotany mba hisian’ny fandrindrana eo an-toerana. Ireo mpivarotra« éponge » kosa dia nafindra eny amin’ny « Sodiate » ampitan’ny TOYOTA Rasseta.
Nizotra am-pilaminana avokoa ny famindràna ireto farany. Nanaiky ny fandaminana niarahana nidinika ireo mpivarotra satria dia tombony ho azy ny fidirana anaty tsena ara-dalàna. Manomboka izao dia takiana amin’izy ireo hofa-tsena izy ireo ary araha- maso amin’ny fahadiovana sy filaminan’ny tsenany.